Sidina Air India Halts: Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, Stockholm
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sidina Air India Halts: Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, Stockholm
Manakana ny sidina ny Air India
Nanambara ny Air India fa hampitsahatra ny sidina mankany amin'ny toerana 5 eropeana farafaharatsiny noho ny fihenan'ny hetahetan'ny mpandeha amin'ireo toerana ireo. Notsongaina ny zotram-pirenena fa tsy zaka ara-bola intsony ireo zotra ireo noho ny vokatry ny valanaretina COVID-19 coronavirus.
Eo amin'ny sisin-kazo misy ny tanànan'i Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, ary Stockholm misy vokany eo noho eo.
Tao amin'ny fanambarana anatiny nataon'ny Diviziona Varotra ao amin'ny Air India, dia mivaky toy izao: “Raha jerena ny toe-javatra COVID dia nankatoavin'ny manam-pahefana manam-pahefana hanidy ireo gara izy ireo ary ho lasa ivelan'ny Internet.”
"Ny IBO amin'izao fotoana izao (biraon'ny famandrihana iraisam-pirenena) dia haverina any India, ary ny gara dia hatolotra ny GSA (mpiasan'ny varotra ankapobeny) aorian'ny famaranana ny fombafomba fanidiana azy", hoy hatrany ny naoty.
Ny IATA (International Air Transport Association) tamin'ny vinavinan'ny volana jolay dia nanambara fa ny fifamoivoizana ataon'ny mpandeha eran-tany (kilometatra mpandeha amin'ny fidiram-bola na RPK) dia tsy hiverina amin'ny ambaratonga alohan'ny Covid-19 raha tsy amin'ny 2024, herintaona taty aoriana noho ny novinavinaina teo aloha.
Ho fanampin'izay, ny IATA dia nilaza fa ho an'ny 2020, ny isan'ny mpandeha manerantany dia antenaina hihena 55 isan-jato raha oharina amin'ny 2019. Ity dia vinavina nohavaozina tamin'ny iray tamin'ny volana aprily raha nanambara ny IATA fa mety hihena 46 ny isan'ireo mpandeha manerantany taona.
Ireo mpandeha izay namandrika ny dia amin'ny Air India mankany Madrid, Milan, Copenhagen, Vienna, ary Stockholm dia tokony zahao amin'ny kaompaniam-pirenena momba ny famerenam-bola.
Air India dia miasa amin'ny sidina mankany amin'ny toeran-tany 103 manerantany miaraka amin'ny serivisy iraisam-pirenena mankany amin'ny tanàna 45 amin'ny firenena 31 ary sidina anatiny mankany amin'ny tanàna 58. Ny zotram-piaramanidina dia miasa ny Boeing 737 Dreamliner, Boeing 777-200LRm Boeing 747-400, Boeing 777-300ER, CEO Airbus A320-214, CEO Airbus A320-214, Airbus A320-251 NEO, Airbus A321, Airbus A319, Airbus A319, ATR 42-320, ary ny ATR 72-600.
Manantona ny mpanjifa ao amin'ny LinkedIn amin'ny maha mpaka sary azy
United Airlines dia manampy serivisy vaovao tsy an-kiato any Florida avy amin'ny tanàna fito